Red Emperor CBD & Delta 8 THC Zvigadzirwa Zvinoshanda Sei
Cannabidiol (CBD) inowanzoitika cannabinoid uye chimwe chezvinhu zvakawandisa zvehemp. CBD yakachengeteka kudya uye haina-psychoactive, yakareba inokosheswa kune ayo anobatsira hutano mhedzisiro pasina mhedzisiro yemishonga yekunyorera.
Iyo Red Emperor CBD yekuburitsa maitiro haina makemikari uye inoshandisa yakamanikidzwa kabhoni dhayokisaidhi (CO2) kudhonza anodiwa phytochemicals (senge CBD) kubva kune hemp chirimwa. Maitiro edu akasununguka chero akasimba emakemikari solvents anowanzo shandiswa kutora CBD mafuta. Kubvisa kwe CO2 kunogarisana nharaunda uye hakusi chepfu, inofungidzirwa senzira yakachengeteka yekubvisa chirimwa pasi rose.
Red Emperor CBD inoshanda pamwe neFDA-yakasimbiswa hemp mapurazi muColorado, California, uye North Carolina. Isu tinopa varimi vedu veCBD mahempe emakemikari nemageneti akasarudzika kuti vaone kuti vanogadzira zvigadzirwa zvemazwi-kirasi hemp. Mushure uye pamberi pedu hemp zvirimwa zvikohwewa, varimi vedu vanoedza zvigadzirwa zvezvirimwa kuti vaone kuti hazvina zviumbwa, zvinyoro, kana simbi inorema.
Mushure mekuedza kwekuyedza kwapera, varimi vedu vanobva vatumira uye kugadzirisa zvigadzirwa zvemiti zvine phytocannabinoid kune imwe yenzvimbo dzedu dzinobvumidzwa kuburitsa dzinobva dzashandura zvigadzirwa zvikava zvigadzirwa zvedu zvepasi rose zveCDD.
Zvigadzirwa zvedu zvakapedzwa zvinogadzirwa uchishandisa ISO-yakasimbiswa maitiro kana GMP. Matunhu edu akasarudzika uye ane patent yeakakwira CBD uye yakaderera THC mbanje hemp inogadzira zvakasarudzika zvinobatsira cannabinoids uye terpenes kupfuura chero yakafanana landrace kana hemp maronda anowanikwa muChinese kana eEuropean maindasitiri hemp.
Nepo mamwe makambani aive achiyambuka-kubereka michina yecannabis kuti ibudise zvimwe THC, yedu genetics timu yaigadzira marangi mbanje kuburitsa ZVAKAWANDA THC kugadzira mamwe asiri-psychotropic cannabinoid maronda senge CBD, CBG, CBN, Delta 8 THC, uye CBC
Zvese zvigadzirwa zvedu zvakagadzirwa kuratidza yakazara yakazara cannabinoids uye terpenes, uye yega Red Emperor CBD & Delta 8 THC chigadzirwa chinosimbiswa neyakaimiririra yechitatu-bato lab kuti ive yakachengeteka, inowirirana, uye yakakwirira-potency zvigadzirwa zvinobvumidza vatengi vedu kurarama hupenyu hunofadza hune hutano.